ရပျရျှဖို့ ဘာတှေ လိုအပျနလေဲ ၊ လူကာကူနဲ့ ဆနျးခကျြတို့ကို စှနျ့လှတျခဲ့ခွငျးက မှနျကနျလား ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူးဟောငျး #ဆာဟာ - SPORTS MYANMAR
ရပျရျှဖို့ ဘာတှေ လိုအပျနလေဲ ၊ လူကာကူနဲ့ ဆနျးခကျြတို့ကို စှနျ့လှတျခဲ့ခွငျးက မှနျကနျလား ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူးဟောငျး #ဆာဟာ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဟောငျး ဖွဈသူ လူးဝဈ ဆာဟာက အသငျး ဟောငျးရဲ့ လကျရှိ တိုကျစဈမှူး ဖွဈသူ မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ ဟာ ကံ အနညျးငယျ ကောငျးဖို့ လိုအပျ နကွေောငျး ၊ သူ့ကိုယျသူ မွှငျ့တငျ နိုငျဖို့ အတှကျ ပွိုငျဆိုငျ မှု တှကေို လိုအပျ ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” သူ ( ရပျရျှဖို့ ) ဟာ ကွောကျမကျဖှယျ ကောငျးတဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား တဈယောကျ ပါ ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ဟာ စံ နမူနာ ကောငျး တှကေို ရှာဖှရေေး ထကျ ကံ အနညျးငယျ ပိုကောငျး နိုငျဖို့ အတှကျ ကွိုးစား နေ သလို ပဲလို့ ကြှနျတျော ထငျ ပါတယျ ”
” လကျရှိ အသငျး မှာ ရှိနေ ကွတဲ့ လူငယျ ကွယျပှငျ့ ကစား သမား လေး အခြို့ က သူတို့ တှေ နရော ရရှိ နိုငျရေး အတှကျ ရပျရျှဖို့ ကို လကျရှိ နရော ကနေ ဖယျထုတျ ဖို့ လိုအပျ တဲ့ ကစား သမား တဈဦး အဖွဈ မွငျနေ ကွ ပါတယျ ”
” ကြှနျတေျာ့ တုနျးက ဆိုရငျ အသငျး မှာ ဆိုးလျရှား ၊ တိဗတျဈ ၊ ရျောနယျဒို ၊ နစ်စတယျ ရှိုငျး ၊ ရှနျးနီ နဲ့ ဂဈ တို့လို ကစားသမား တှေ ရှိနေ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ ကစားသမား တှေ အားလုံး က ကြှနျတေျာ့ ကို အရံ ခုံတနျး အပျေါ တှနျးပို့ ပေး နိုငျစှမျး ရှိခဲ့ ကွတဲ့ ကစားသမား ကောငျးတှေ ခညျြး ပါပဲ ”
” ဒါ့ကွောငျ့ နရော တဈခု ရရှိ နိုငျရေး အတှကျ ကြှနျတျော အလုပျ ဘယျလောကျ လုပျဆောငျ ရ မလဲ ဆိုတာ ကို တှေးထား ခဲ့တာ ထကျ ဆယျဆ ပိုပွီး အာရုံစိုကျ ရငျး အလုပျ ကွိုးစား လုပျဆောငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ”
” ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ အားလုံး က တဈကယျ့ကို ထူးကဲ လှတဲ့ ကစားသမား ကောငျးတှေ ဖွဈခဲ့ ကွပွီး ကြှနျတေျာ့ထကျ ပိုပွီး အကြိုး သကျရောကျမှု ရှိအောငျ လုပျနိုငျ ကွတယျလေ ။ သူတို့ တှကေ ဆု ဖလား တှလေညျး ရယူ ခဲ့ဖူး ကွ ပါတယျ ။ လကျရှိ အသငျး မှာတော့ သူတို့ တှကေ ခွစှေမျး ကို ဆု ဖလား ရယူ ပွီး သကျသေ မပွ နိုငျကွ သေး ပါဘူး ”
” အဲ့တာ တှကေ သကျရောကျ မှု အရမျး ကို ကွီးမား လှ ပါတယျ ။ ရပျရျှဖို့ ကို ကွညျ့လိုကျ ရငျတော့ သူဟာ လကျရှိ အခြိနျ တှမှော အဲ့ဒီလို အနအေထား တှအေောကျ ကရြောကျ နခွေငျး မရှိဘူး လို့ ခံစား နရေ ပါတယျ ” လို့ လူးဝဈ ဆာဟာ က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွတဲ့ အလကျဆဈ ဆနျးခကျြ နဲ့ လူကာကူ တို့ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ရခွငျး က အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ပိုငျးမှာ လဈဟာ မှုတှေ ဖွဈပျေါ စတေယျ လို့ ဆာဟာ ယုံကွညျ နေ ပမေယျ့ ဒါဟာ မှနျကနျ တဲ့ ဆုံးဖွတျ ခကျြ တဈခု ဖွဈခဲ့ ကွောငျး ဆာဟာ က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အဲ့ဒီ ကစားသမား တှကေို ထှကျခှာ ခှငျ့ ပေးခဲ့ ခွငျးကွောငျ့ သူတို့ တှေ မှနျကနျ ခဲ့ ကွတယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျ ပါတယျ ။ သူတုို့ တှေ ကိုယျတိုငျ က အဲ့ဒီ မှာ ဆကျလကျ ရှိနေ လို ကွတဲ့ အရိပျ အယောငျ တှကေို မပွသ ခဲ့ကွ ပါဘူး ။ ကြှနျတျော တို့ အဲ့တာ ကို နားလညျ သိရှိ ကွရ ပါ့မယျ ”
” အဲ့တာ တှကေ စီးပှားရေး တဈခု နဲ့ပဲ မဆိုငျ ခဲ့ ပါဘူး ၊ အသငျး အပျေါ စီမံ ခနျ့ခှဲ မှု တဈခု လညျး ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ အကယျလို့ သူတို့ တှသော အသငျး မှာ မရှိလို ကွရငျ အသငျး ကို တညျဆောကျ နတေဲ့ အခါ မှာ သူတို့ တှကေို ရှိနေ စခွေငျး က မှနျကနျ တဲ့ စိတျဓါတျ ခံယူခကျြ တှကေို ဖွဈပျေါ စမှော မဟုတျ ပါဘူး ”
” ဒါဟာ တဈကယျ့ ကို ခကျခဲ လှတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခု ဖွဈနေ ပါ လိမျ့မယျ ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ လူကာကူ နဲ့ ဆနျခကျြ တို့ဟာ တျောရုံ ကစားသမား တှေ မဟုတျ ကွဘူး လေ ။ သူတို့ တှကေ တဈကယျ့ အသုံး တညျ့တဲ့ ကစားသမား တှေ ပါပဲ ”
” ဒီအတှကျ ကစားသမား တှေ သူတို့ ပြျောရှငျ ဖို့ ခမြှတျ ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ဟာလညျး မှနျကနျတယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အခု အသငျး ရဲ့ အနအေထား အမှနျ က သူတို့ တှရေဲ့ နရော ကို အငျအား ဖွညျ့တငျး ခွငျး ပါပဲ ။ ဒီ ပွိုငျပှဲ မှာ ခငျဗြား တို့ဟာ လူ အငျအား ဖွညျ့တငျး ကွရ ပါ့မယျ ”
” ကြှနျတျော တို့ တှဟော ဂိုးတှေ ကို သှငျးယူ လို ကွတဲ့ အတှကျ လူ အငျအား ဖွညျ့တငျးမှု တှကေို ပွုလုပျ ကွရ ပါ့မယျ ။ အဲ့ဒီ ကစားသမား တှကေ 10 သို့မဟုတျ 15 ဂိုး လောကျတော့ သှငျးယူ နိုငျကွ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာ က တဈကယျ ပဲ လုံလောကျ ရဲ့လား ? ” လို့ ဆာဟာ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ရပ်ရ်ှဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်နေလဲ ၊ လူကာကူနဲ့ ဆန်းချက်တို့ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်းက မှန်ကန်လား ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း #ဆာဟာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဖြစ်သူ လူးဝစ် ဆာဟာက အသင်း ဟောင်းရဲ့ လက်ရှိ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ ကံ အနည်းငယ် ကောင်းဖို့ လိုအပ် နေကြောင်း ၊ သူ့ကိုယ်သူ မြှင့်တင် နိုင်ဖို့ အတွက် ပြိုင်ဆိုင် မှု တွေကို လိုအပ် ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” သူ ( ရပ်ရ်ှဖို့ ) ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ယောက် ပါ ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာ စံ နမူနာ ကောင်း တွေကို ရှာဖွေရေး ထက် ကံ အနည်းငယ် ပိုကောင်း နိုင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစား နေ သလို ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ”
” လက်ရှိ အသင်း မှာ ရှိနေ ကြတဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် ကစား သမား လေး အချို့ က သူတို့ တွေ နေရာ ရရှိ နိုင်ရေး အတွက် ရပ်ရ်ှဖို့ ကို လက်ရှိ နေရာ ကနေ ဖယ်ထုတ် ဖို့ လိုအပ် တဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး အဖြစ် မြင်နေ ကြ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော့် တုန်းက ဆိုရင် အသင်း မှာ ဆိုးလ်ရှား ၊ တိဗတ်စ် ၊ ရော်နယ်ဒို ၊ နစ္စတယ် ရွိုင်း ၊ ရွန်းနီ နဲ့ ဂစ် တို့လို ကစားသမား တွေ ရှိနေ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ကစားသမား တွေ အားလုံး က ကျွန်တော့် ကို အရံ ခုံတန်း အပေါ် တွန်းပို့ ပေး နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ ကြတဲ့ ကစားသမား ကောင်းတွေ ချည်း ပါပဲ ”
” ဒါ့ကြောင့် နေရာ တစ်ခု ရရှိ နိုင်ရေး အတွက် ကျွန်တော် အလုပ် ဘယ်လောက် လုပ်ဆောင် ရ မလဲ ဆိုတာ ကို တွေးထား ခဲ့တာ ထက် ဆယ်ဆ ပိုပြီး အာရုံစိုက် ရင်း အလုပ် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် ခဲ့ရ ပါတယ် ”
” ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ အားလုံး က တစ်ကယ့်ကို ထူးကဲ လှတဲ့ ကစားသမား ကောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ ကြပြီး ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီး အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိအောင် လုပ်နိုင် ကြတယ်လေ ။ သူတို့ တွေက ဆု ဖလား တွေလည်း ရယူ ခဲ့ဖူး ကြ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အသင်း မှာတော့ သူတို့ တွေက ခြေစွမ်း ကို ဆု ဖလား ရယူ ပြီး သက်သေ မပြ နိုင်ကြ သေး ပါဘူး ”
” အဲ့တာ တွေက သက်ရောက် မှု အရမ်း ကို ကြီးမား လှ ပါတယ် ။ ရပ်ရ်ှဖို့ ကို ကြည့်လိုက် ရင်တော့ သူဟာ လက်ရှိ အချိန် တွေမှာ အဲ့ဒီလို အနေအထား တွေအောက် ကျရောက် နေခြင်း မရှိဘူး လို့ ခံစား နေရ ပါတယ် ” လို့ လူးဝစ် ဆာဟာ က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် နဲ့ လူကာကူ တို့ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ရခြင်း က အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ပိုင်းမှာ လစ်ဟာ မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် စေတယ် လို့ ဆာဟာ ယုံကြည် နေ ပေမယ့် ဒါဟာ မှန်ကန် တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ဆာဟာ က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အဲ့ဒီ ကစားသမား တွေကို ထွက်ခွာ ခွင့် ပေးခဲ့ ခြင်းကြောင့် သူတို့ တွေ မှန်ကန် ခဲ့ ကြတယ် လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ။ သူတုို့ တွေ ကိုယ်တိုင် က အဲ့ဒီ မှာ ဆက်လက် ရှိနေ လို ကြတဲ့ အရိပ် အယောင် တွေကို မပြသ ခဲ့ကြ ပါဘူး ။ ကျွန်တော် တို့ အဲ့တာ ကို နားလည် သိရှိ ကြရ ပါ့မယ် ”
” အဲ့တာ တွေက စီးပွားရေး တစ်ခု နဲ့ပဲ မဆိုင် ခဲ့ ပါဘူး ၊ အသင်း အပေါ် စီမံ ခန့်ခွဲ မှု တစ်ခု လည်း ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အကယ်လို့ သူတို့ တွေသာ အသင်း မှာ မရှိလို ကြရင် အသင်း ကို တည်ဆောက် နေတဲ့ အခါ မှာ သူတို့ တွေကို ရှိနေ စေခြင်း က မှန်ကန် တဲ့ စိတ်ဓါတ် ခံယူချက် တွေကို ဖြစ်ပေါ် စေမှာ မဟုတ် ပါဘူး ”
” ဒါဟာ တစ်ကယ့် ကို ခက်ခဲ လှတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်နေ ပါ လိမ့်မယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူကာကူ နဲ့ ဆန်ချက် တို့ဟာ တော်ရုံ ကစားသမား တွေ မဟုတ် ကြဘူး လေ ။ သူတို့ တွေက တစ်ကယ့် အသုံး တည့်တဲ့ ကစားသမား တွေ ပါပဲ ”
” ဒီအတွက် ကစားသမား တွေ သူတို့ ပျော်ရွှင် ဖို့ ချမှတ် ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာလည်း မှန်ကန်တယ် လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခု အသင်း ရဲ့ အနေအထား အမှန် က သူတို့ တွေရဲ့ နေရာ ကို အင်အား ဖြည့်တင်း ခြင်း ပါပဲ ။ ဒီ ပြိုင်ပွဲ မှာ ခင်ဗျား တို့ဟာ လူ အင်အား ဖြည့်တင်း ကြရ ပါ့မယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ ဂိုးတွေ ကို သွင်းယူ လို ကြတဲ့ အတွက် လူ အင်အား ဖြည့်တင်းမှု တွေကို ပြုလုပ် ကြရ ပါ့မယ် ။ အဲ့ဒီ ကစားသမား တွေက 10 သို့မဟုတ် 15 ဂိုး လောက်တော့ သွင်းယူ နိုင်ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ က တစ်ကယ် ပဲ လုံလောက် ရဲ့လား ? ” လို့ ဆာဟာ က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။